Asallaa: Qeerroon Asallaa dararaan Uummata Wallaggaa irraa haa dhaabbatu Jechuun Hiriira bahanii sagalee dhageessisaa jiru. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAsallaa: Qeerroon Asallaa dararaan Uummata Wallaggaa irraa haa dhaabbatu Jechuun Hiriira bahanii sagalee dhageessisaa jiru.
Qeerroon Asallaa dararaan Uummata Wallaggaa irraa haa dhaabbatu Jechuun Hiriira bahanii sagalee dhageessisaa jiru.
“Loltootni Mootummaan Wallaggatti bobaase ummata ajjeessuuf saamu irra jiru
Ragaan godina Qeellam Wallagaa Aanaa Anfiloo irraa nu gahe akka ibsutti (nama DD baqate FF dhufe irraa dhagayame), loltooni RIB Ganda Kurroo weeraruun qonnaan bultoota naga’an qe’ee isaani turan keessaa namoota 8 battaluma ajjeessuun heedduu madaeessani, kaaniis rebicha hamaa irraan gahani jiru. Ajjeechaa kanas kan raawwachaa jiran dirqiin uffata WBO itti uwwisuun gabaasaf akka tolu uummata nagahaa rasaasan balbala isaa irratti ajjeessaa akka jiran baramee jira. Reeffa warra balaa kanaan du’ees kaasani awwaaluun rakkisaa ta’uuf kan bineensan nyaatame illee akka jiru dhagamaa jira.
RIB kunis ajjeechaa kana erga raawwate booda mana qonnaan bulaa sakata’uun qabeenya argate hunda (qarshii, warqee, looni kkf) saamuun kan fudhatan ta’u hubatame jira. Mana qotee bulaa sangaa ayyaanaaf gurgurate tokko qofa keessa qarshi 40,000.00 fudhatni jiru. Uummatni baadiyaa naannoo sanaa ammaan tana qabeenya isa hafte gate achi baqate gara D/Doolloo galu illee oddeeffannoon naannoo nu dhaqabe ni ibsa.
Aana dhuma kanatti paastarii tokko (Daawit Maammoo) qabeenya mana isaa saamani, ajjeessuuf uffata WBO itti kaa’ani gara iddoo gabaa erga geessani booda; isaan keessa tokko dhiisi haa deemu jechuun irraa kan ka’e lubbuun oolee magaala Dambi Doolloo ti baqate akka jiru dhagahamaa jira.
Gochi amma uummata Oromoo Wallgaa irratti Mootummaa kanaan raawwatamaa jiru kuni bara Dargii fi Wayyaane iyyuu uummata keenya irra hin geenye. Gara jabbinni akkanaa gocha bara Minilki MM faarsuu fakkaata.
Oromoon hundi gochi kana bifa maraan, bakka jirutti balaalleeffachu qaba. MNO “Cundhuura” waan ta’eef waa tokko irraa hin eegamu.
EPP (PP)!! Oromoo lixa network irra kutaanii , ibsaa balleessaani dukkana keessa ka’anii gara Finfinneetti immo gandaa keessa deemanii nafxanyaa sooruu!! https://t.co/DiqNm1ceAi pic.twitter.com/TFib0jutTv
— Kichuu (@kichuu24) January 7, 2020